Farmaajo oo ka hadlay qarax xalay lagu diley saraakiil ka tirsan ciidamada Booliska - Jowhar somali news leader
Farmaajo oo ka hadlay qarax xalay lagu diley saraakiil ka tirsan ciidamada Booliska
By Mahad	 Last updated May 10, 2021
Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qarax ismiidaamin ah oo xalay lagu weeraray saldhiga booliska degmada Waaberi.
Waxana uu tacsi u diray qoysaska, qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen saraakiishii, saraakiil xigeenkii, askartii iyo muwaadiniintii kale ee ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Baarlamaanka Jubbaland oo maanta dhagaysanaya hadaljeedinta…
Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo ka wadahadlay xoojinta…
Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubni iyo wadajir, si looga guuleysto cadawga arxan laawayaasha ah ee caadeystay gumaadka iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa geerida Taliyihii Booliiska Degmada Waaberi Gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane, Saraakiisha iyo Askarta kale ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee u shahiiday iyagoo ka shaqeynaya Amniga dalkooda iyo dadkooda. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo Hay’adaha Amniga waxaan ugu baaqayaa in si wadajir ah ay isaga kaashadaan ka hortagga dhagarta arxan-darrada ah ee argagixisada.”
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Alle uga baryey -iyada oo lagu jiro habeen khayar badan oo ka mid ah tobankii danbe ee bisha barakaysan ee Ramadaan- saraakiishii, askartii iyo shacabkii Soomaaliyeed ee ku naf waayey qaraxan bahalnimada ah in uu hooygooda ka yeello Jannatul Firdowsa, Saraakiisha kale iyo shacabka ay waxyeeladu ka soo gaartayna Eebbe u booga dhayo.
Mahad 3380 posts
Ra’iisul Wasaare Rooble”Waa in aan isu kaashannaa la dagaallanka argagixisada”
Isfaham laga gaaray shaqaaqo dhawaan ka dhacday deegaanka Gobadley ee gobolka…
Wasiirka A Dibadda Soomaaliya oo la kulmay Ra’iisul wasaaraha dalka Kuwait
Wasiirka Gargaarka Khadiijo Diiriye oo magaalada Geneva kaga qebgashay shirka…
Ten years after Gaddafi’s death, a Libyan city still yearns for his rule
hanad	 Oct 20, 2021
Africa needs $ 50 billion a year for climate change
French troops shoot and kill a woman while patrolling against the…